BUDDHIST TERMS' Dictionary: BUDDHA (2) - ဗုဒ္ဓ
BUDDHA (2) - ဗုဒ္ဓ
ဘီစီ ၆၂၃-ခုနှစ်တွင် ကပ္ပိလ၀တ္ထုမြို့တော်၌ ခမည်းတော် သုဒ္ဓေါဒနမင်း၊ မယ်တော် သီရိမဟာမာယာဒေ၀ီတို့မှ ဖွားမြင်တော်မူသည်။ သကျသာကီဝင်မင်းမျိုးဖြစ်သည်။ သက်တော် ၁၆-နှစ်တွင် ဒေ၀ဒဟမြို့တော်မှ ဘဒ္ဒကဉ္စနာ ယသောဓရာဒေ၀ီနှင့် လက်ထပ်၍ ထီးနန်းစည်းစိမ် ခံစားတော်မူသည်။ သက်တော် ၂၉-နှစ်တွင် သားတော် ရာဟုလာ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ထိုနေ့မှာပင် တောထွက်တော်မှုခဲ့၍ ဥရုဝေလ တောအုပ်၌ ၆-နှစ်တိုင်တိုင် ဒုက္ကရစရိယာ အကျင့်ကို ကျင့်ခဲ့သည်။ သက်တော် ၃၅-နှစ်တွင် ဂယာမြို့အနီး ဗောဓိမဏ္ဍိုင်၌ လောကသုံးပါးတွင် အတုမရှိ မြင့်မြတ်သော သဗ္ဗညူဗုဒ္ဓအဖြစ်သို့ ရောက်တော်မူခဲ့သည်။ ၄၅-၀ါ ကာလပါတ်လုံး တရားတော်များကို လှည့်လည် ဟောကြားတော်မူခဲ့ပြီး၊ သက်တော် ၈၀-အရွယ်တွင် ကုသိနာရုံ၌ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူခဲ့သည်။
ဗုဒ္ဓသည် သတ္တ၀ါများ စီးပွားချမ်းသာအကျိုးငှာ ပွင့်တော်မူလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓကို ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ ဆည်းကပ်ပါ၏။
He was born in Kapi8lavatthu in 623 B.C. His parents were King Suddhodana and Queen Mahᾱ Mᾱyᾱ of Sakyan Clan. At the age of Sixteen, he married Bhaddakancana Yasodharᾱ of Devadaha City and took the royal throne. At the age of twenty-nine, he gotason and named him Rᾱhulᾱ. On the day his son as born, he renounced the world and wandered about in Uruvela grove, searching for the ultimate Truth from various teachers. For six long years he practiced the Dukkaracariyᾱ, the difficult practice which no ordinary person can undertake. At the age of thirty-five, he attained full Enlightenment at the foot of the Bodhi Tree near the town of Gayᾱ. He taught the dhamma for forty-five years of Buddhahood and at the age of eighty, he realized Parinibbᾱna at Kusinᾱra.